Sanbaloolshe “Fahad Yaasiin wuxuu u ekyahay nin Ayatollah ka ah dowladda” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Sanbaloolshe “Fahad Yaasiin wuxuu u ekyahay nin Ayatollah ka ah dowladda”
Sanbaloolshe “Fahad Yaasiin wuxuu u ekyahay nin Ayatollah ka ah dowladda”
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ka dalbaday in muddo 48 saac ah uu ku soo gudbiyo warbixin dhameystiran, oo ku aaddan kiiska Ikraan Tahliil Faarax, ka dib markii uu sheegay warbixintii ay hay’addu soo saartay Khamiistii inay ahayd mid aan lagu qanci karin.
Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe), Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka ayaa sheegay inay la tahay in muddada loo qabtay Taliska NISA aanu ku soo gudbin doonin warbixinta laga doonayo.
“Ilama aha inay suurtagal tahay, laakiin ka Ra’iisal Wasaare ahaan inuu ogyahay in Hay’adda Nabad Suggida iyo taliskooduba aysan soo gudbin warbixin dheeli tiran oo lagu qanci karo, haddii ay hayaana mar hore ayay soo gudbin lahaayeen.” Ayuu yiri Taliyihii hore ee NISA oo la hadlay BBC.
Su’aal ahayd waxa dhici kara, haddii muddadaasi aanu Taliska NISA ku soo bandhigin warbixinta laga dalbay oo la weydiiyay ayaa sheegay suurtagalnimada in Ra’iisal Wasaaruhu sii qorsheystay tallaabadii uu qaadi lahaa, oo ah in is bedel uu ku sameeyo Taliska NISA, balse ay adag tahay fulinteeda.
“Inay dhici karto in Ra’iisal Wasaaruhu uu ka fekeray go’aanka uu qaadan lahaa, oo ay tahay tallaabo sharci ah oo cidi ay xilkeeda ku weyso, oo Hoggaanka Hay’adda is bedel lagu sameeyo, laakiin waxay ila tahay ma maqashay hadda ka hor in mukulaal ay dhibtay dooliyo, dooliyadiina inta ay u shireen dhaheen si aan mukulaashaan uga badbaadno waa inaan mukulaasha qoorta u xirnaa koor, oo markii dambe la go’aansaday in saas la yeelo, laakiin cid ku xirto la waayay.” Ayuu yiri Sanbaloolshe.
Waxa kaloo uu yiri “Waxaan ka baqayaa Ra’iisal Wasaaruhu inuu rabo go’aan inuu qaato, laakiin isaga iyo Farmaajo ay noqdaan dooliyadii ku xiri waayay koorta qoorta mukulaasha. Waxaan ula jeedaa in Hoggaanka Dalku ku dhici waayo inuu tallaabo sharciga waafaqsan ama tallaab shacabka Soomaaliyeed uu ku qanco uu ka qaadi waayo Hay’adda Nabad Suggida & Hoggaankeeda.”
Sababta uu sidaasi ugu maleynayo oo la weydiiyay ayaa ku jawaabay “Taariikhiyan inta aan la socono qalalaaso ka waaweyn intaan iyo fadeexadooyin ka badan ayaa soo maray Taliyaha, weligiisna tallaabo lagama qaadin. Marka nin sharciga ka sareeyo ayuu u ekyahay ama nin Ayatollah camal ka ah nidaamka, oo lama taabtaan ah.”
Sanbaloolshe ayaa yiri “Waxaa la yiri beenlow runtiisa kama soo tagto, haddii ay run hayaan mar hore ayay soo bandhigi lahaayeen, waqti ku filana waa la siiyay, wax caddayn ah oo lagu qanci karo oo maangal ah inay keeni karaan ilama aha.”
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa sheegay in marka uu helo xogta uu u baahan yahay uu ka qaadan doono go’aanka ku haboon, isla-markaana uu la wadaagi doono shacabka Soomaaliyeed.
Muddada loo qabtay Hoggaanka NISA waxaa hadda ka harsan 24 saac oo keliya, waxaana isha lagu wada haya tallaabada xigta, ee uu qaadi doono Ra’iisal Wasaaraha, si ay cadaalad u helaan qoyska Ikraan Tahliil.
Previous articleAfgembi ka dhacay dalka Guinea iyo Madaxweyne Conde oo gacanta lagu dhigay
Next articleRa’iisal Wasaare Rooble oo shaqada ka joojiyay Taliyaha NISA, Fahad Yaasiin